Afrika, 01 April 2018
Miguna Miguna oo Mar Kale Kenya Laga Masaafuriyay
Siyaasiga reer Kenya ee lagu magacaabo Miguna Miguna ayaa sheegay in saraakiisha dalkaasi ayaga oo dhulka ku jiiraya ka masaafuiyeen dalka Kena.
Ethiopia: Abiy Ahmed oo loo Doortay Madaxa EPRDF
Xisbiga haya talada dalka Ethiopia ee EPRDF ayaa gudoomiye u doortay Abiy Ahmed, oo ah siyaasi Muslim ah oo kasoo jeeda qowmiyada Oromada ee Itoobiya, tallaabadan oo waddada u xaari karta in isagu uu noqdo Ra’isulwasaarihii saddexaad ee ay Itoobiya yeelato muddo 23 sano ah.
Falanqeyn: Doorashada Madaxtinnimo ee Masar
Cod bixinta doorashada madaxtinimada ee dalka Masar ayaa maanta gashay maalinti labaad, kadib marki ay shacabka Masar si weyn ugu soo baxeen maalinti 1-aad ee Isniintii shalay.
Jacob Zuma oo La Maxkamadeynayo
Madaxweynihii hore ee dalka South African Jacob Zuma ayaa looga yeeray maxkamad si uu u wajaho 6-da bisha April dacwad isaga ka dhan ah oo la xiriirta musuqmaasuq.
Masar oo ay Dadku Madaxweyne Soo Dooranayaan
Dadweynaha reer Masar ayaa maanta u codaynaya doorashi si weyn loo filayo inuu ku guulaysto madaxdweyne Cabdulfataax Al-Sisis. Ninka la tartamaya Muusa Mustafa Muusa ayaa isagu laftiisa horey u taageeray Al-Sisis.
Djibouti: Shirkii ACP iyo M. Yurub oo Soo Gabagaboobay